Yintoni Endimele Ndiyazi Ngokuthumelelana Imiyalezo Nemifanekiso Yamanyala Ngefowuni? | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCambodia IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikamba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOssetia IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Ayintoni la manyala?
Yintoni imiphumo yokuthumelelana imifanekiso yamanyala?
Ukuba ibinguwe ubuza kuthini?
La manyala okanye isexting kukuthumela imiyalezo, iifoto okanye iividiyo ezibonisa amanyala ngeselfowuni. Enye indoda ithi: “Le sele iyindlela eqhelekileyo yokuncokola. Nithumelelana imiyalezo nize kamva nithumelelane iifoto ezivuselela inkanuko.”
Kutheni abantu besenza le nto? Elinye igqwetha elacatshulwa kwiThe New York Times lathi, olunye ulutsha luthi “ukuba nefoto yomntu ohamba ze efowunini kubonisa ukuba niyalalana.” Omnye oselula uthi isexting yindlela ekhuselekileyo yokuba neentlobano zesini. Woleka ngelithi: “Awukhulelwa ibe awufumani zifo ezidluliselwa ngokuba neentlobano zesini.”
Ezinye izizathu ezibangela ulutsha luthumelelane amanyala ngeselfowuni zezi zilandelayo:
Ukudlala ngothando nomntu onethemba lokuba uza kuthandana naye.
Ngenxa yokuba sele uthunyelelwe ifoto ebonisa amanyala ibe uziva unyanzelekile ukuba nawe uthumele ifoto efanayo.
Emva kokuba uthumele ifoto ngeselfowuni, awukwazi kuyilawula into abantu abayenzayo ngayo nendlela abaza kukujonga ngayo. UAmanda Lenhart umbhali nomphandi wePew Research Center, ethetha ngesexting wathi: “Kulula ngabantu ukuthumela nokugcina ubungqina bokuziphatha kakubi.”
Umfana uye athumele ifoto yentombazana ehamba ze kubantu abaninzi ukuze onwabise nje abahlobo bakhe.
Xa baliwe ngamantombazana, abanye abafana baye baziphindezelele ngokuthumela iifoto zalo mantombazana ehamba ze.
NGABA UBUSAZI? Kwiimeko ezininzi, ukuthumela iifoto zabantu abahamba ze kufaniswa nokuxhaphaza abantwana okanye ukusasaza iphonografi yabantwana. Abanye abantwana abaye bathumela ezi foto baye babekwa ityala lokuxhaphaza abantwana ngokwesini.
IBhayibhile ithetha kakuhle ngokulalana kwabantu abatshatileyo. (IMizekeliso 5:18) Kodwa ayikufuni ukulalana kwabantu abangatshatanga. Makhe sihlole ezi vesi zeBhayibhile zilandelayo:
“Uhenyuzo nako konke ukungahlambuluki nokubawa makungakhe kukhankanywe kwaukukhankanywa phakathi kwenu, . . . kwanehambo elihlazo nentetho yobudenge nokuqhula okungamanyala.”—Efese 5:3, 4.
“Bhubhisani . . . amalungu enu omzimba asemhlabeni, uhenyuzo, ukungahlambuluki, inkanuko yesini, umnqweno owenzakalisayo, nokubawa.”—Kolose 3:5.
Ezi vesi azisilumkisi nje kuphela ‘ngohenyuzo’ (ukulalana kwabantu abangatshatanga) kodwa kwanangezinto ezifana ‘nokungahlambuluki’ (ibinzana ngokubanzi elibhekisela kulo naluphi na uhlobo lokuziphatha kakubi) ‘nenkanuko yesini’ (engabhekiseli ekukhanukaneni kwabantu abatshatileyo kodwa kumnqweno okhokelela ekuziphatheni okubi).
Ukuthumela iifoto zabantu abahamba ze kukuko njani “ukungahlambuluki”?
Isexting iyivuselela njani “inkanuko yesini” engafanelekanga?
Kutheni umnqweno wokubuka okanye ukusasaza iifoto zabantu abahamba ze ‘usenzakalisa’?
Ezi vesi zeBhayibhile zilandelayo zinezizathu ezingakumbi zokuba siyeke ukuthumela iifoto zabantu abahamba ze.
“Yenza unako-nako ukuba uzinikele ukholekile kuThixo, ungumsebénzi ongenazintloni nganto.”—2 Timoti 2:15.
“Luhlobo luni lwabantu enifanele nibe lulo ngokuphathelele ihambo engcwele nezenzo zozinikelo lobuthixo!”—2 Petros 3:11.
Ezi vesi zithetha ngeengenelo zokuziphatha kakuhle. Xa uziphethe kakuhle, awubi nexhala lokuba ngeny’ imini izenzo zakho ziza kukulandela.—Galati 6:7.
Ngaba ndiyikhathalele indlela abaziwa ngayo abanye?
Ngaba ndifuna ukonwatyiswa ngento ebakhathazayo abanye?
Ukuthumela iifoto zabantu abahamba ze kundenza ndaziwe njengomntu onjani?
Ngaba ukuthumela iifoto zabantu abahamba ze akuzi kundenza ndingathenjwa ngabazali bam?
IBALI LOKWENENE “Ndinomhlobo wam owayigcina iyindaba yakwamkhozi into yokuba uthandana nomnye umfana. Noko ke, wathumela ifoto yakhe ehamba ze kulo mfana, waza nomfana wathumela eyakhe. Zange kudlule neentsuku ezimbini, utatakhe wafuna ukujonga ifowuni yakhe. Wabona imiyalezo, ibe wadana. Wayibuza intombi yakhe, ibe yavuma yonke into. Ndiyazi ukuba waba buhlungu ngenxa yale nto wayenzayo, kodwa abazali bakhe babothukile yaye babekhathazekile! Abazi nokuba bangaphinda bamthembe.”
Inyaniso yile: Ukuthumelelana iifoto zomntu ohamba ze kuthoba isidima salo uthumelayo nalo uthunyelwayo. Enye intombazana eyanyanzelwa ngumfana athandana naye ukuba athumele ezi foto ithi: “Le nto ndiyenzileyo iyandikruqula futhi indenza ndidane.”
Ekubeni ukuthumelelana iifoto zabantu abahamba ze kunemiphumo emibi, siya kuba senza kakuhle xa silandela icebiso leBhayibhile:
“Dlulisa amehlo am angaboni oko kungento yanto.”—INdumiso 119:37.
Sebenzisa icebiso leBhayibhile kule meko. Funda oko kuthethwa nguJanet, uze ukhethe oko ucinga ukuba kufanelekile.
“Ngenye imini ndadibana nomfana, ibe sanikana iinombolo zethu zeselfowuni. Kwathi kungekapheli neveki wacela ukuba ndimthumele ifoto yam ndinxibe ipenti ne-bra.”—UJanet.
Ucinga ukuba yintoni ebifanele yenziwe nguJanet? Ukuba ibinguwe ubuza kuthini?
A Unokuthi: ‘Akukho nto imbi ngaloo nto. Kakade, ukuba besiselwandle, ebeza kundibona ndinxibe ibathing suit.’
B Unokuthi: Andiqinisekanga ukuba uphezu kwantoni. Makhe ndithumele ifoto engavezi kangako ndize ndibone ukuba kuza kwenzeka ntoni.’
C Unokuthi: Lo mfana ufuna ukulala nam qha. Ndiza kuwucima lo myalezo.’
U-C lolona khetho lufanelekileyo, andithi? Kakade ke, iBhayibhile ithi: “Onobuqili ubona intlekele azifihle, kodwa abangenamava bayadlula baze bafumane isohlwayo.”—IMizekeliso 22:3.
Eli bali likaJanet lichaza eyona nto idla ngokubangela le ngxaki nezinye iindlela zokuziphatha kakubi: Ngaba uyabakhetha abahlobo? (IMizekeliso 13:20) Ibhinqa eliselula uSarah lithi: “Tshomana nabantu owaziyo ukuba abazi kubunyamezela ububi.” Ibhinqa eliselula uDelia liyavumelana noku. Lithi: “Abanye abantu ocinga ukuba ziitshomi zakho abakuncedi uziphathe kakuhle, kodwa bakwenza uziphathe kakubi. Ukuba benza izinto ezingafunwayo nguThixo, bakwenza ungazenzi izinto ozaziyo ukuba zifanelekile. Ngaba nyhani ufuna loo nto?”
MUSA UKUZITHUMELA NAKUBANI NA IIFOTO!
Ungaze ufote okanye uthumele ifoto ongenakufuna ibonwe ngabazali.
Yiqonde into yokuba nayiphi na ifoto oyithumelayo iza kubonwa ngabanye enoba iceliwe okanye ayicelwanga imvume yakho.
Ngaphambi kokuba ucime nayiphi na ifoto yomntu ohamba ze, chazela umntu omdala mhlawumbi umzali, utitshala okanye umcebisi wabafundi.